ⓘ ကတ်သရင်း ဂျွန်ဆင်
ကတ်သရင်း ကိုးလ်မန်း ဂိုဘယ် ဂျွန်ဆင် သည် အာဖရိကန်-အမေရိကန် သင်္ချာပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး နာဆာတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ လေယာဉ်တည်ဆောက်မှုနှင့် ပျံသန်းခြင်းနည်းပညာနှင့် အာကာသပရိုဂရမ်များအတွက် များစွာသော တွက်ချက်မှုများကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့သူဖြစ်သည်။ Celestial navigation အား တိကျစွာတွက်ချက်ပေးနိုင်မှုတွင် ကျော်ကြားပြီး နာဆာတွင် ဆယ်စုနှစ်အတော်ကြာအောင် လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ နာဆာမှာလုပ်ကိုင်စဉ်ကာလတွင် သူမသည် မာဂျူရီပရောဂျက်မှစ၍ များစွာသော ပျံသန်းမှုများအတွက် ပျံသန်းမှုလမ်းကြောင်းများ၊ launch windows၊ အရေးပေါ် ပြန်ဆယ်ယူနိုင်မည့် အပြန်လမ်ကြောင်းများကို တွက်ချက်ခဲ့သည်။ သူမဆောင်ရွက်ခဲ့သော ပရောဂျက်များတွင် John Glenn နှင့် Alan Shepard တို့၏ မစ်ရှင်များ၊ ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် လကမ္ဘာသို့ပျံသန်းမည့် အပိုလို ၁၁ ပျံသန်းမှုများမှသည် Space Shuttle program ထိပါဝင်ခဲ့သည်။ သူမ၏တွက်ချက်မှုများသည် ထိုမစ်ရှင်များအောင်မြင်ရေးအတွက် အတော်လေးကို အရေးပါခဲ့သည်။ ဂျွန်ဆင်သည် အင်္ဂါဂြိုဟ်သို့ သွားရောက်ရန်စီမံကိန်းအတွက်လည်း တွက်ချက်မှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ဂျွန်ဆင်၏ သင်္ချာတွင် ဉာဏ်ရွှင်မှုကို သူမ၏ငယ်ဘဝကတည်းကပင် သိရှိခဲ့ကြသည်။ ဂရင်းဘရီယာကောင်တီတွင် အာဖရိကန်-အမေရိကန်လူမျိုးများအတွက် ရှစ်တန်းအောင်ပြီးလျှင် ကျောင်းဆက်ထား၍ မရသောကြောင့် အနောက်ဗာဂျီးနီးယားအင်စတီကျူတွင် အထက်တန်းကို ဆက်လက်သင်ကြားနိုင်စေရန် စီစဉ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကျောင်းသည် အနောက်ဗာဂျီးနီးယားကောလိပ်ယခုအခါ တက္ကသိုလ်အဖြစ်တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး၏ ကျောင်းဝန်းထဲတွင် တည်ရှိသည်။ ထိုသို့ကျောင်းပို့ရန် စီစဉ်စဉ်က ဂျွန်ဆင်၏ အသက်မှာ ၁၀ နှစ်သာရှိသေးသည်။ ကျောင်းဖွင့်ချိန်တွင် မိသားစုနှင့်ခွဲခွာခဲ့ရပြီး ကျောင်းပိတ်ချိန် နွေရာသီမှ နေရပ်သို့ ပြန်ခဲ့ရသည်။
ဂျွန်ဆင်သည် အသက် ၁၄ နှစ်တွင် အထက်တန်းကျောင်းပြီးခဲ့ပြီး အနောက်ဗာဂျီးနီးယားကောလိပ်သို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုကောလိပ်သည် သမိုင်းတွင် လူမည်းများအတွက် တက်ရောက်နိုင်သော ကောလိပ်များမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားဘဝတွင် သူမသည် ကောလိပ်မှ ပို့ချသော သင်္ချာသင်ရိုးအားလုံးကို ယူ၍သင်ကြားခဲ့သည်။ များစွာသော ပါမောက္ခများသည် သူမအား ပဲ့ပြင်ဆုံးမခဲ့ကြပြီး ထိုအထဲတွင် သူမအား အထက်တန်းကျောင်းသူဘဝမှ ဆုံးမလမ်းညွှန်ခဲ့သော သင်္ချာနှင့် ဓာတုဗေဒပညာရှင် Angie Turner King နှင့် အာဖရိကန်-အမေရိကန်လူမျိုးများထဲတွင် သင်္ချာပညာရပ်ဆိုရာ ပါရဂူဘွဲ့ကို တတိယမြောက်ရရှိခဲ့သော W.W. Schiefflin Claytor တို့ပါဝင်ခဲ့သည်။ Claytor သည် ကတ်သရင်းအတွက်သာ ရည်ရွယ်၍ သင်ရိုးသစ်များ ရေးဆွဲသင်ကြားခဲ့သည်။ သူမသည် ၁၉၃၇ ခုနှစ်တွင် Summa Cum Laude Latin honorsဘွဲ့ကို သင်္ချာနှင့် ပြင်သစ်ဒီဂရီများနှင့်အတူ ရရှိခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် သူမ၏အသက်မှာ ၁၈ နှစ်သာ ရှိသေးသည်။ သူမသည် မာရီရွန်မြို့၊ ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်တွင် လူမည်းကျောင်း၌ သင်ကြားရေးအလုပ်ကို ရရှိခဲ့သည်။
Group Achievement Award presented to NASAs Lunar Spacecraft and Operations team – for pioneering work in the field of navigation supporting the spacecraft that orbited and mapped the moon in preparation for the Apollo program။
၂၀၁၆၊ Astronomical Society of the Pacifics Arthur B.C. Walker II Award။
၂၀၁၇၊ Daughters of the American Revolution DAR Medal of Honor
၂၀၁၀၊ သိပ္ပံဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါရဂူဘွဲ့ Old Dominion University၊ နော်ဖော့ခ်မြို့၊ ဗာဂျီးနီးယား။
၂၀၀၆၊ သိပ္ပံဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါရဂူဘွဲ့ Capitol Technology University၊ လာအူရယ်မြို၊ မေရီလန်းပြည်နယ်။
၁၉၉၈၊ ဥပဒေဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါရဂူဘွဲ Farmingdale State College။
၂၀၁၄၊ National Womens History Museum မှ De Pizan Honor။
Zierdt-Warshaw၊ Linda; Winkler,၊ Alan; Bernstein၊ Leonard 2000။ American Women in Technology: an encyclopedia ။ Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO။ ISBN 1576070727 ။ CS1 maint: extra punctuation link
NASA Technical Reports Server NTRS: Johnson, K. G.
OConnor၊ John J.; Robertson၊ Edmund F.၊ "Katherine Coleman Goble Johnson"၊ MacTutor History of Mathematics archive ၊ University of St Andrews.
Wikipedia: ကတ်သရင်း ဂျွန်ဆင်